Ubisi othosiweyo, idessert kamakhulu yesiko | Ukupheka kweKhitshi
Namhlanje ndibonisa oku dessert yendabuko eqhelekileyo gastronomy yethu, ubisi olosiweyo. Le nto yenziwe ixesha elide, ekubeni iyidessert elula efuna izithako ezimbalwa, ke iba yidessert emnandi yokusoloko unayo.
La ubisi olosiweyo Kukutya kwesiqhelo kwimimandla esemantla, nangona imvelaphi yayo ingaziwa ncam. Ihlala ityiwa njenge dessert, nangona kukho nabo bayityayo.
Ilitha enye yobisi.
100 g iswekile.
100 g yengqolowa.
Icing iswekile okanye eqhelekileyo.
La ubisi olosiweyo Yidessert apho izithako zayo zingumgubo, ubisi kunye neswekile, ezijika zibe luhlobo lwe curd ethi ke idityaniswe ilungele ukutyiwa.
Ke ngoko, ukwenza le dessert yesiqhelo gastronomy yelizwe lethu, kufuneka kuqala senze i intlama eyosiweyo yobisi. Ukwenza oku, siza kubilisa ubisi kwisitya.
Ke kwifayile ye- yiyo, Siza kuxuba iswekile kunye ne-cornstarch ngeentonga ezimbalwa. Xa ubisi lubile, siya kuligalela ngokukhawuleza kwisitya kwaye sixhase ngamandla ukuze yonke into ibambane kakuhle.
Emva koko, siya kubuya size kubona lo mxube emlilweni kwaye sixhokonxe de sifumane intlama eshinyeneyo. Oku, siya kuyibeka kwisitya esinexande esinzulu, kwaye siya kusibeka efrijini side sime. Oku kufuneka kugalelwe ibhotolo encinci, ukuze kamva ingahlali.
Okokugqibela, siza kusika izahlulo ezisikiweyo imimoya yobisi olosiweyo. Siza kuzambathisa ngomgubo kunye neqanda elibethiweyo, kwaye siziqhekeze kwioyile eninzi. Ukuhombisa ungasebenzisa icing okanye iswekile eqhelekileyo kunye nesinamon yomhlaba.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Iikeyiki zerayisi
Iikhilokholi ngokusebenza 452
Cuisine yesiNtu, Postres
Umendo opheleleyo kwinqaku: yokuqalisa » Iiresiphi zehlabathi » Cuisine yesiNtu » Ubisi othosiweyo, iresiphi yesiko
I-Campero, isidlo sakusasa esiqhelekileyo kwiidolophana zaseSierra de Cádiz